काटेको वा पोलेको अङ्गमा लगाउने घरेलु उपचार विधि ? Nepali Health News
हात काट्दा के लगाउने ? Finger-cut-treatment: निम को पात (Neam), चिसो पानी (Cold Water), बेसार (Turmeric) , नरिवलको तेल (Coconut oil), लसुन (Garlic), तेल बेसार (Oil & Turmeric), तुलसीको पात (Tulsi), घ्यु कुमारी (Aloe Vera)
निम को पात (Neam):
चिसो पानी (Cold Water):
बेसार (Turmeric) :
नरिवलको तेल (Coconut oil):
लसुन (Garlic) :
तेल बेसार (Oil & Turmeric):
यदि घाउ भयो वा कुनै चिज पोलेर डाम बसेको छ वा पानी जमेको छ भने तेल बेसार लगाउनु पर्दछ यसो गर्नु निकै उत्तम हुनेछ । भने खुट्टा वा हात को औलाहरुको कापमा घाउ भएको छ भने पनि तेल बेसार लगाउनु उत्तम हुन्छ.
यदि काटेको ठाउमा शुद्द मह लगाउने हो भने घाउबाट ब्याक्टेरियालाई बाहिर निकाल्न मद्दत गर्दछ । महमा एन्टीब्याक्टेरियल, एन्टी फंगल र एन्टी इन्फ्लामेटरी पाइने गर्दछ । त्यसैले घाउलाई मन तातो पानि ले धुनु अगाडी मह लगाएर सफा गर्नु उचित हुन्छ ।
प्याज (Onion) :
घ्यु कुमारी (Aloe Vera):
घ्यु कुमारी लगाउने तरिका (How to use Aloe Vera?) :
तुलसीको पात (Tulsi) :
बाबरीको पात (Basil):